Mugabe lashes out at South African torture probe | GlobalPost
on Jun 11, 2012 @ 2:04 PM
Jun 11, 2012 @ 2:04 PM Published
Mugabe said that South African President Jacob Zuma and other ANC leaders in South Africa must "apply every means at their disposal" to prevent the court-ordered investigation against Zimbabwean police officers and others. Calling the white South Africa judge who made the ruling "a boer," a pejorative term for whites, Mugabe said the ruling came from whites "still in our midst yearning for the old flags" of Rhodesia and apartheid South Africa. Mugabe was speaking to representatives of the liberation movements that ended colonial rule in Angola, Mozambique, Namibia, South Africa and Tanzania, and that all remain in power more than 30 years later.
Mugabe has reason to be angry at southern Africa's ruling parties, their pressure on him may be the first step to free and fair elections in Zimbabwe that will see him and his Zanu-PF voted from power. More from GlobalPost: Zimbabwe's jails: full of human kindness?